António de Oliveira Salazar (28 Abriil 1889 - 27 Julay 1970) wuxuu ahaa nin u dhashay dalka Boortaqiiska iyo kaligii taliye u soo noqday raiisal wasaaraha Portugal intii u dhaxeysay 1932 ilaa 1968. Wuxuu mas'uul ka ahaa Estado Novo ('New State'), oo ah dowlada gacan ku rimiska ah ee xukumi jirtay Portugal ilaa 1974 .
Dhaqaaleyahan tababbaran, Salazar wuxuu galay nolosha bulshada isagoo ahaa wasiirka maaliyadda isagoo taageero ka helay Madaxweynaha Óscar Carmona kadib afgambigii Bortaqiiska ee 28kii May 1926. Milatariga 1926 wuxuu isu arkay inay yihiin ilaaliyaha qaranka, laakiin ma aysan hayn wax tilmaan ah sida ay wax looga qabto caqabadaha halista ah ee saacadda. Muddo sanad gudihiis ah, oo ku hubeysan quwado gaar ah, Salazar wuxuu isku dheeli tiray miisaaniyadda wuxuuna dejiyay lacagta Boortaqiiska. U soo celinta nidaamka xisaabaadka qaranka, dhaqan gelinta gunnada iyo qashinka qalin-qalinka, Salazar wuxuu soo saaray kii ugu horreeyay ee siyaado badan oo miisaaniyadeed ah, oo ah sheeko ugub ku ah Portugal. Muddo afar sano ah wuxuu is tusay inuu yahay saaxir siyaasadeed oo xitaa kafiican kan dhaqaale. Wuxuu ilbaxnimadiisii ​​ku beddelay xukunkii keli-taliska ahaa markii siyaasadihii dalal aad u tiro badani ay militari noqdeen. Ujeedada Salazar waxay ahayd siyaasadeynta bulshada oo aan ahayn abaabul dadweyne.
Isaga oo ka soo horjeeday dimuqraadiyadda, shuuciyadda, hantiwadaagga, dowlad la’aanta iyo xoriyadda, xukunka Salazar wuxuu ahaa mid muxaafid ah oo waddani ah dabeecad ahaan. Salazar wuxuu iska fogeeyay faashiisnimada iyo naasiyiinta, oo uu ku dhaleeceeyay "jaahilnimada jaahiliyada" oo aan aqoonsanayn xadka sharci, diineed iyo mid anshax toona Si ka duwan Mussolini ama Hitler, Salazar waligiis ma lahayn ujeedo ah inuu abuuro xisbi-dowlad. Salazar wuxuu ka soo horjeeday fikirka xisbiga oo dhan wuxuuna 1930-kii abuuray National Union xisbi keli ah, kaas oo uu u suuq geeyay "xisbi aan ahayn", isagoo ku dhawaaqay in Ururka Qaran uu noqon doono naceybka xisbi siyaasadeed. Salazar wuxuu kor u qaaday Katooliga, laakiin wuxuu ku dooday in doorka kaniisaddu uu ahaa mid bulsho, ee uusan ahayn mid siyaasadeed, wuxuuna kala xaajooday Concordat ee 1940. Mid ka mid ah hal ku dhigyada maamulkii Salazar wuxuu ahaa "Deus, Pátria e Família" (oo macnaheedu yahay 'Ilaah, Aabbo iyo Qoys') ).
Iyada oo Estado Novo ay awood u siineyso inuu adeegsado awoodo siyaasadeed oo aad u ballaaran, Salazar wuxuu adeegsaday faafreeb iyo booliis qarsoodi ah si uu u joojiyo mucaaradka, gaar ahaan wixii la xiriira dhaqdhaqaaqa Shuuciga. Wuxuu taageeray Francisco Franco Dagaalkii Sokeeye ee Isbaanishka wuxuuna door muhiim ah ka qaatay in Portugal iyo Spain laga dhigo dhex-dhexaad intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka isagoo weli gargaar iyo gargaar siiya xulafada. In kasta oo aanu dimuqraadiyad ahayn, Boortaqiiska intii uu xukumayay wuxuu ka qayb qaatay aasaaskii ururo caalami ah oo muhiim ah. Boortaqiiska wuxuu ka mid ahaa 12-kii xubnood ee aasaasey ururkii waqooyiga Atlantik ee loo soo gaabiyo (NATO) sanadkii 1949, wuxuu ku biirey midowga yurub bixiya sanadkii 1950, wuxuuna ka mid ahaa aasaasayaashii ururka ganacsiga xorta ah ee yurub (EFTA) 1960, iyo aasaaskii. xubin ka ahaa Ururka Iskaashiga Dhaqaalaha iyo Horumarinta sanadkii 1961. Intii uu xukunka hayey Bortuqiisku wuxuu sidoo kale ku biiray heshiiskii guud ee canshuuraha iyo ganacsiga ee 1962, wuxuuna bilaabay Dagaalkii Gumeystaha ee Boortaqiiska. Caqiidada Pluricontinentalism waxay aasaas u ahayd siyaasaddiisa dhuleed, fikradda Boqortooyada Boortaqiiska oo ah dowlad mideysan oo faafisay qaarado badan.
Estado Novo ayaa burburtay intii lagu jiray Kacaankii Dhaqanka ee 1974, afar sano kadib dhimashadii Salazar. Qiimeynta maamulkiisa waa kala duwanaa, iyadoo taageerayaashu ay amaaneen natiijooyinkiisa kuwa dhaliishana waxay cambaareeyeen qaababkiisa. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira heshiis guud oo ah in Salazar uu ahaa mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu saameynta badan taariikhda Boortaqiiska. Tobanaankii sano ee la soo dhaafay, "ilo iyo habab cusub ayaa waxaa adeegsanaya taariikhyahano reer Burtuqiis ah iyagoo isku dayaya inay la qabsadaan kali-talisnimadii socotey 48-ka sano."
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=António_de_Oliveira_Salazar&oldid=210402"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 17 Maarso 2021, marka ee eheed 16:47.